Golden City condo for sale
Golden City condo for sale #3200Lakh2Bedroom Condo for sale in GOLDEN CITY, Yankin, Yangon * Location - Yankin (Golden City Condo Block 5- 21st Floor-06) * Living area - 986 sq-ft *Inya Lake/Garden View * 1 master bedroom * 1 single bedroom * ...
~ Good Place & Fair Price ~
~ Good Place & Fair Price ~ 【Followed by English message】 ⏩ အိမ်ခြံမြေစာရင်းအမှတ် > ( RN - 12355 ) 👍👍 ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံအနီးက ကွန်ဒိုအလွှာမြင့်အခန်းလေးပါ အငှားရော အရောင်းရော ရှိပါတယ်နော် 👍👍 📞 ဟယ်လိုသာလုပ်လိုက်ပါ MOOM မှ လိုက်ပြပေးပါမယ်ရှင် ...
👍ကမာရွတ်ထဲမှ ဝယ်ချင်သူများအတွက်👍 🏡🏡Sqft(1408) ကျယ်ဝန်းပြီး အိပ်ခန်း 3ခန်းပါ ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုလေး ရောင်းပေးပါ့မယ်။ 🏡🏡 👍နေရာကောင်း လူစည်တဲ့ နေရာလေးပါနော် 👍 👍လမ်းလည်ကျယ်တယ်နော်👍 👏#ဖွဲစည်းပုံများ# 👉 1Master bedroom 👉 2Single bedrooms 👉 ...
~ ready to move ~ 【Followed by English message】 🔎 အိမ်ခြံမြေစာရင်းအမှတ် > ( RN - 12385 ) 💿💿 မြောက်ဒဂုံ မြို့နယ် ၃၈ ရပ်ကွက်ထဲမှာရှာနေသူတို့အတွက် ၂ ထပ် တိုက်လုံးချင်း အရောင်းလေးကို တင်ပေးလိုက်တယ်နော်....... နေရာ - မြောက်ဒဂုံ ...
LT1906005909: Landed house for Sale on Pyay Road
LT1906005909: Landed house for Sale on Pyay Road * Location - Kamaryut *2storye house * Land size - 7,000 sq-ft (70x100) * Freehold land type * Good location (On Pyay Road) * Safety Car Parking * 350,000 kyats per sq-ft for sale * 24,500 lakhs for ...
👍ကမာရွတ်ထဲမှ ဝယ်ချင်သူများအတွက်👍 🏡🏡Sqft(3300) ကျယ်ဝန်းပြီး အိပ်ခန်း 6ခန်းပါ ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုလေး ရောင်းပေးပါ့မယ်။ 🏡🏡 👍နေရာကောင်း လူစည်တဲ့ နေရာလေးပါနော် 👍 👍လမ်းလည်ကျယ်တယ်နော်👍 👏#ဖွဲစည်းပုံများ# 👉 4Master bedrooms 👉 2Single ...
👍ကမာရွတ်ထဲမှ ဝယ်ချင်သူများအတွက်👍 🏡🏡Sqft(2200) ကျယ်ဝန်းပြီး အိပ်ခန်း 2ခန်းပါ ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုလေး ရောင်းပေးပါ့မယ်။ 🏡🏡 👍နေရာကောင်း လူစည်တဲ့ နေရာလေးပါနော် 👍 👍လမ်းလည်ကျယ်တယ်နော်👍 👏#ဖွဲစည်းပုံများ# 👉 1Master bedroom 👉 1Single bedroom 👉 ...
~ Ayar Chan Thar Condominium ~
~ Ayar Chan Thar Condominium ~ 【Followed by English message】 ⏩ အိမ်ခြံမြေစာရင်းအမှတ် > ( RN - 12354 ) 🍒🍒 အလွှာမြင့်ကြိုက်သူများအတွက် ဒဂုံဆိပ်ကမ်းက ဧရာချမ်းသာကွန်ဒိုလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် 🍒🍒 ❗ရေကူးကန် ၊ Gym နဲ့ Play Ground ...
😲🔥Congratulations!!! "Daniel" for being Top Sale of the month of JULY 2019 and hit ultra Target🔥🥳
😲🔥Congratulations!!! "Daniel" for being Top Sale of the month of JULY 2019 and hit ultra Target🔥🥳 👍Keep up the awesome job Daniel! we are proud to represent you as one of us!👏👏👏 ...
Rent For Apartment Sanchaung Township Location: Yan Gyi Aung Street , Sanchaung Township,near Kyun Taw Road Floor: 3rd,Floor Room: 1,Bedroom...Parquet Flooring and Full Furnished Size: 800, Sqft Price: USD $ 400/Month Hot line... ...
Check this url: https://www.lotayaproperty.com/property-for-sale?page=7